OPDO Irraa Jijjiirama Eeguun Lafa Loon Hinoollee Dikee Barbaaduudha | QEERROO
OPDO Irraa Jijjiirama Eeguun Lafa Loon Hinoollee Dikee Barbaaduudha
Posted on December 29, 2017 by Qeerroo
Mudde 29, 2017
Qamadiif Garbuun ingirdaada, Daagujjaan Gargaaraa, Bisingaan Siphoo akka qabu namuu beeka. Akkasuma qabsoon Oromoo quucarsitoota qabsoof gantuu qabaachuu addaan baasee beekuun dirqama dhalootaati. Qabsoon uummata tokkoo dhaloota oladeemaa yoo qabaate egeree qaba. Keessattuu qabsoo ga’eessonni deggaran irra, qabsoo dhalattoonni haaraan deggaran egeree jabaa qabaata.
Hanga yeroon gahutti quucarsitoonni midhaanii olii kunneen midhaan faana aramamu. Gaafa aangi’an addaan dhiluun gaafa ga’u Maancidii(meeshaa qonnaa aramaaf itti gargaaraman) barbaadee qote bulaan ykn abbaan ardaa jara kanneen dhabama godha. Kana booda wantoonni midhaan sana xuuxan erga dhabamanii booda, midhaan gaariif midhaan guntuta ykn naqa tolu ta’u. Maancidiin qote bulaa Birraa aramaa midhaan fakkaatee guddate caraga.
Akkuma kana qabsaa’otaaf quucarsitoonni qabsoo wal faana saatii guksan nii qabu. Saatii wal faana guksan sanatti walumatti qabaa qabsaa’otaa taasisanii kunuunsuun gaariidha. Hanga dhumaatti walitti qabanii kunuunsuun garuu waandabaati. Adeemsa keessa addaan dhilamuun gaafa dhuftu maancidiin qabsaa’otaa jarreen dhabamsiisuu qaba. Kun tooftaa qabsoo jiraachisuuti jennee fudhanna. Diinni qabsoo Oromoo Oromoota fakkaattee waggoota dheeraa kunuunfamaa turterti ta’a. Haa badan saatiin ammaa aramaa qabsoof siphoo qabsoo addaan dhiluuf yeroon gaheera. Kanneen kanaaf maancidiin Qeerroo ol haa kaafamu jenna. Jarreen qabsoo keenya dhoraa turan haa caragnu. Jarreen kana gaafa caragnu qabsoof haala mijeessuu hubatuu qabnaa.
Qeerroo Bilisummaa Oromoo akka eelee sibiilaatti kanneen ilaalan jiru. Asumaan waan himuu feenu Qeerroon bilisummaa Oromoo eelee sibiilaa kan ariitiin ho’ee ariitiin qabbanaa’u miti. Naamusa mataasaaf akeeka mataasaa qabatee waan socho’uuf kaayyoo ganamaaf bakka laatee, kaayyoorratti ijaajjee hojjeta. Namoonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo akka habaqiitti fudhatan afarsaa siyyaasaan yeroo afarsaa oolan agarra. Qeerroon Bilisummaa Oromoo habaqii afarsaan siyyaasaa asiif achi bubbutu miti. Kanaaf bakka kaayyoo isaaf jaallan ganamaa sana dhaabbatee qabsoo finiinsa. Afarsaa Siyyaasaa sagaliif sagaltama jala dhaabbachuus kanaaf danda’e. Kaayyoo irratti masakamuutu akkana.
Duuchaatti Oromoonis ta’e qaamni Oromoof falmu kamuu “Sangaan nii dhala jedhee sangaa jala eeguun” gowwummaadha. Sangaan sangaadha. Waan hinjirre waan hinjijjiiramnerraa jijjiirama yeroo eegnu hinqabnu. Jijjiirama kan fidu kaayyoo jabaa uummataa fudhatee kan sochiirra waggoota dheeraaf jiru adda Bilisummaa Oromoo ta’u hubachuun barbaachisaadha. OPDO irraa jijjiirama eeguun bakka Loon hinoollee Dikee barbaaduudha. OPDO’n bittillee garboonfataati. Bixxillee kana dhabamsiisuun garboonfataa dhabamsiisuudha. Waan ta’eef FXG bakka maraa finiinsinee jirru gad haa jabeessinu.
Uummanni Oromoo Qawwee saamamee ture haa deeffatu. Kan danda’u haa bitatu. Kan Qawwee bitachuu dadhabe Eeboo isaa haa qarsiifatu, Maancaa haa tumsiifatu, Shimala haa muratu. Qabsoo jalqabaa caasaa Wayyaanee OPDO bakka maraa bubbutuuf dhabamsiisuu irratti haa hojjetu. Qabsoo roga maraan finiinee jiru gad-haajabeessinu.
2 thoughts on “OPDO Irraa Jijjiirama Eeguun Lafa Loon Hinoollee Dikee Barbaaduudha”
Pingback: OPDO Irraa Jijjiirama Eeguun Lafa Loon Hinoollee Dikee Barbaaduudha
Pingback: OPDO Irraa Jijjiiramaa Eeguun Lafa Loon Hin Oollerraa Dikee Barbaadadhu! Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa – nama barri miite.